10 အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အများစုကအထူးပွဲများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 10 အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အများစုကအထူးပွဲများ
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 18/12/2020)
သင်ရုံနယ်သာလန်သို့ပြောင်းရွှေ့သို့မဟုတ်ရက်အနည်းငယ်သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်ရထားပေါ်တွင်ခုန်ဖို့စဉ်းစားနေကြသည်ဆိုပါက, သငျသညျဖြစ်ကောင်းဘာအံ့သြနေကြတယ် 10 အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အများစုကအထူးပွဲများ များမှာ. သငျသညျမျှော်ကြည့်ဖို့အများကြီးလည်းမရှိသိရန်အလိုရှိပါလိမ့်မည်, နေပါစေသင်လည်ပတ်ယခုနှစ်ဘယျအခြိနျ.
အဖြစ်မော်ကွန်းပေါ့ပ်ပွဲတော်များ, ထူးခြားတဲ့ရှိပါတယ် နယ်သာလန်နိုင်ငံအထူးဖြစ်ရပ်များ သငျသညျဘယ်နေရာမှာမဆိုတခြားကိုရှာဖွေမည်မဟုတ်ကြောင်း: ယင်းနှင့်ဆက်စပ်သောအထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပ ဒတ်ခ်ျဘုရင်စနစ်, လေရဟတ်, နှင့် tulips. ဤရွေ့ကားဖြစ်ရပ်များကိုယ့်ကိုကိုယ်ပျော်မွေ့ဖို့အားလုံးကိုစိတ်ကူးနည်းလမ်းများဖြစ်ကြပြီးအမှုအရာလုပ်နေတာ၏ဒတျချြလမ်းကိုစွဲလန်းနှစ်သက်ရ!
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 1: နယူးနှစ်များနေ့ထိုးဆင်း (Nieuwjaarsduik)
ဤသည်မှာသူတို့၏အမျိုးအတစ်ခုဖြစ်သည် မောဘို့မဟုတ်ကြောင်းနယ်သာလန်အတွက်အထူးဖြစ်ရပ်များနှလုံး! သင်နှစ်တွင်လတ်ဆတ်တဲ့ start လိုပါက, နယူးနှစ်နေ့တွင်ခေါ်ဆောင်သွားတစ်ဦးရှိအေးမြသောငုပ်ယူ (နှစ်သစ်ကူးနေ့). ဤသည်ဒတ်ခ်ျပွဲတော်အတွက်ရေကူးကလပ်အားဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည် 1960. ရှိပါတယ် 209 ငုပ်နေရာများ နယ်သာလန်၌သင်တို့တစ်ငုပ်ယူနိုင်ပါသည်. ပေမဲ့, Scheveningen မှာမြောက်ပင်လယ်သို့ရေငုပ်, အဆိုပါဟိဂ်, အထိအတူလူကြိုက်အများဆုံးတည်နေရာဖြစ်ပါသည် 60,000 လူထု. ထိုနောက်မှ, ဖြန်းဖြန်းထရေကူး erwtensoep တစ်ခွက်ကိုတင်ပြကြသည်, တစ်ပူနွေး meaty ပဲဟင်းချို.
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 2: တရုတ်နှစ်သစ်ကူး
သင်နယ်သာလန်ဥရောပမှာအကြီးဆုံးတရုတ်အသိုင်းအဝိုင်းတဦးရှိကြောင်းသိခဲ့ပါ? ကျနော်တို့ကကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်ပေါ်မှာအစက်အပြောက်ထိုက်သည်ထင် 10 နယ်သာလန်နိုင်ငံအများစုကအထူးဖြစ်ရပ်များ! သူတို့ကအများစုအမ်စတာဒမ်မှာနေထိုင်, ရိုတာဒမ်, နှင့် The Hague, တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကျင်းပဖြစ်ရပ်များတစ်အကွာအဝေးရှိသည့်အတွက်. အမ်စတာဒမ်အတွက်, နဂါးစစ်ရေးပြကြည့်ဖို့ဆည်ရင်ပြင်နှင့် Nieuwmarkt / Zeedijk မှဦးခေါင်း, ခြင်္သေ့သည်ခုန်, နှင့်မီးရှူးမီးပန်းများ. သငျသညျကိုလည်း De Bijenkorf ဌာန store မှာအထူးလှုပ်ရှားမှုများတက်ရောက်နိုင်ပါသည်, လက်ရေးလှအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအပါအဝင်, ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ, နှင့်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားများ, ဒါမှမဟုတ်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်း fo Guang ရှမ်းသူဟွာ.
အဆိုပါနေ့ကအစားအသောက်တွေအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်, နှင့်အမ်စတာဒမ်အတွက်, သငျသညျလမ်းပေါ်စျေးကွက်မှာအရသာရှိတဲ့အစားအစာကိုစားနိုင်ပါတယ်, ပင်လယ်ပြင်နန်းတော်မှာ (ပထမဦးဆုံးတရုတ်စားသောက်ဆိုင် floating ဥရောပ), ဒါမှမဟုတ်အများအပြား၏တဦးတည်းမှာ တရုတ်စားသောက်ဆိုင် အဆိုပါ Stormsteeg နှင့် Geldersekade တလျှောက်. အဆိုပါဟိဂ်အတွက်, သငျသညျကိုတှေ့လိမျ့မညျ တရုတ်ပွဲတော် အဆိုပါမြို့တော်ခန်းမ၏မိုးလုံလေလုံမှန်အိမ်ဆောင်နှင့် Wagenstraat န်းကျင် Den Haags တရုတ်တန်းအတွက်. သငျသညျရိုတာဒမ်အတွက်ဖြစ်ရပ်များတရုတ်နှစ်သစ်ကူးအထိဦးဆောင်ရှာတှေ့နိုငျ, တရုတ်ဟောငျးအနောက်နိုင်ငံများနှင့် Westkruiskade တရုတ်တန်း wijkpark န်းကျင်အထိမ်းအမှတ်ပွဲများကျင်းပတဲ့နေ့ချွတ်ထိပ်ဆုံး. သငျသညျအယူသည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်, တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအကြိုအပေါ်တစ်ဦးအသားစိမ်းငါးသုပ်ကိုစား (yu Sheng) ကောင်းသောကံသို့မဟုတ် FAI hai ရောက်စေဖို့, ပင်လယ်ရေညှိအမျိုးအစား, သာယာဝပြောမှုအတွက်. Gong Xi Fa Cai! (ပျော်ရွှင်ဖွယ်နှစ်သစ်!)
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 3: Keukenhof (မတ်လရန်မေလ)
အဆိုပါ Keukenhof ပွဲတစ်ပွဲနယ်သာလန်နိုင်ငံအကျော်ကြားဆုံးဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ပါသည်. ပေါင်းစုံရောင်စုံသန်းပေါင်းများစွာမှာကွောကျရှံ့ကြည့် blooming tulips နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်မေလမှမတ်လနှောင်းပိုင်းကနေဒီလှပတဲ့ဒတျချြပန်းခြံအတွင်းရှိ. အဆိုပါ Keukenhof, အရာနည်းလမ်းများ မီးဖိုချောင်ဥယျာဉ်တော်, 15 ရာစုဝန်းကျင်ကတည်းကပင်များနှင့်အဖုံးတစ် whopping ထားပါတယ် 32 ဟက်တာ. ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ, အဆိုပါ Keukenhof ကြိုဆို 800.000 နှစ်စဉ်ဧည့်သည်များ.
၏အထူးများ၏တဦးတည်း 2018 ဆောင်ပုဒ်ကတော့အလွန်ကြီးမားသောပန်းပွင့်မီးသီး mosaic ခဲ့သည်, 250m2 ၏ဧရိယာဖုံးအုပ်နှင့်ပါဝင်သည်ဟု 50.000 tulips, စပျစ်သီးကို hyacinths, နှင့် crocuses. လာမယ့်စာစောင်ကဘာလဲပါဝငျလိမျ့မညျ?
နယ်သာလန်နိုင်ငံအထူးပွဲများအခမဲ့အစားအသောက်လည်းပါဝင်သည်ဆိုပါက, သငျသညျငါ့ကိုရေတွက်လို့ရပါတယ်! တွင် 50% သွား, ကလက်တွေ့ကျကျတစ်ဦးခိုးယူဖြစ်ပါသည်! ဒီဒတျချြသို့သွားရောက် အစားကောင်းကြိုက်သူများအဘို့ပွဲတော်, သင်အရူးလျှော့စျေးအတွက်နယ်သာလန်ထိပ်တန်းစားသောက်ဆိုင်အချို့တွင်စားသောက်နိုင်သည့်နေရာ.
အများအပြားအတွက်ပါဝင်စားသောက်ဆိုင်ရာပေါင်းများစွာ ဒတ်ခ်ျမြို့ကြီးများ ၏အထူးနှုန်းမှာတစ်ဦးအံ့အားသင့်သုံးသင်တန်းညစာ menu ကိုပူဇော် 28,50 ယူရို. Michelin စားသောက်ဆိုင်ကြယ်ပွင့် အပိုအခကြေးငွေ, နှင့်စားသောက်ဆိုင်များထိပ်၌စာရင်း 250 သေးငယ်တဲ့ဖြည့်စွက်လည်းလိုအပ်. သင်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာအပေါက်တစ်ပေါက်၏အလွန်အကျွံချပြီးမပါဘဲရွေးချယ်စရာညစာစားအချို့သောကွဲပြားခြားနားသောဒဏ်ငွေစမ်းဖို့ကန့်သတ်ဘတ်ဂျက်နှင့်အတူအစားကောင်းကြိုက်သူများသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာစပ်စုများမှာပဲဖြစ်ဖြစ်, ပြီးနောက်သင်စားသောက်ဆိုင်အပတ်ခစျြလိမျ့မညျ. ဒီအထူးကမ်းလှမ်းမှုနယ်သာလန်နိုင်ငံတစ်နှစ်နှစ်ကြိမ်ရာအရပ်ကိုကြာ.
လွယ်ကူစားပွဲတစ်ခုစာအုပ်ဆိုင်အောင်, ထိုအဖြစ်အပျက်၏စီစဉ်၏စာရင်းကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ 500 ပါဝင်စားသောက်ဆိုင်, မြို့နှုန်း, ယင်းအပေါ် စားသောက်ဆိုင်အပတ်က်ဘ်ဆိုက်.
5: ဓမ္မရာဇဝင်နေ့ (ဧပြီလ 27)
နယ်သာလန်နိုင်ငံအရှိဆုံးအထူးဖြစ်ရပ်များတစ်ခုမှာ, လျှင်မအရှိဆုံးပျော်စရာနှင့်ဖရိုဖရဲတဦး, တွင်ဖြစ်ပါသည် ဓမ္မရာဇဝင်နေ့, which ဖြစ်ပါသည် ရှငျဘုရငျ Willem အလက်ဇန်းဒါးရဲ့ မွေးနေ့. ဒတ်ခ်ျမြို့ကြီးများ အိမ်ရှင်လမ်းပေါ်ပါတီများ, ခွေးလှေးစျေးကွက်, နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ, ယခုနှစ်အကြီးမားဆုံးပွဲတော်သို့နယ်သာလန်၏တပြင်လုံးကိုလှည့်. သငျသညျကျိန်းသေအရှိဆုံးတဦးအားဤ add နိုင်ပါတယ် နယ်သာလန်နိုင်ငံအထူးဖြစ်ရပ်များ! ပြည်သူ့ဆင်နွှဲဖို့ထွက်ဦး, ဂီတ play, လိမ္မော်ရောင်ထဝတ်စားဆင်ယင်ကာ All-ပတ်ပတ်လည်ကောင်းသောများ, လျှင်မဖရိုဖရဲ, အချိန်. ဓမ္မရာဇဝင်ညဘုရငျမြားနေ့မတိုင်မီညဉ့်ကိုဂုဏ်ပြုတာဖြစ်ပါတယ်, အတွက်ရိုင်းပါတီများနှင့်အတူ ဆွဲဆောင်မြို့စင်တာများ မိုင်ပတ်ပတ်လည်ကလူအစုအဝေး.
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 6: ပန်း
၉ မီတာမြင့်တဲ့ရေပေါ်မျောနေတာကိုမင်းတွေ့ဖူးလား, ပန်းပွင့်တွေဖုံးလွှမ်းနှင့်လမ်းများမှတဆင့်နှိပ်, ဘာမျှပေမယ့်လူအင်အားစွမ်းအားဖြင့်? ကောင်းစွာ, သငျသညျဖို့အကြောင်းရှိပါတယ်! ပန်း Zundert လုံးဝစေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးပန်းပွင့်ချီတက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအသီးအသီး Hamlet ကအစဉ်အဆက်တည်ဆောက်ခဲ့သည်အလှဆုံးကတော့ float တည်ဆောက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်. သငျသညျလွှမ်းမိုးပါလိမ့်မည်အဖြစ် Zundert ၌ဤအလွန်အထူးအဖြစ်အပျက်သွားရောက်ကြည့်ရှု. Corso Zundert အားလုံးမြင်နေနှင့်အကြောင်းပါ, သော, ယုံကြည်!
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 7: Leiden ၏ကယ်ဆယ်ရေး (Leiden ၏ကယ်ဆယ်ရေး)
အဆိုပါ 10 နယ်သာလန်နိုင်ငံအများစုကအထူးဖြစ်ရပ်များအစဉ်အလာတို့ပါဝင်သည်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဒါပေါ့. Leiden ၏အဖြစ်အပျက်ကိုသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်! ဒါဟာစပိန်ဝိုင်းထားခြင်းနှင့်မြို့အတွင်းရှိ၏နောက်ဆက်တွဲကယ်ဆယ်ရေးအထိမ်းအမှတ် 1574. Leiden တတန်းအတွက်နှစ်ရက်တဦးတည်းကြီးမြတ်ပွဲတော်ဖြစ်လာ. အဆိုပါချီတက်ပွဲခံစားကြည့်ပါ, ပျော်စရာတရားမျှတတဲ့, စျေးကွက်, ဖျော်ဖြေပွဲ, ပါတီများက, မီးကျည်မီးပန်း, နှင့်ရိုးရာဟင်းလျာများ.
ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများနှင့်ပါတီများစွာရှိသော်လည်း, Leidens Ontzet သမိုင်းဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူများစွာကိုအစဉ်အလာနှင့်အတူအခမ်းအနားဖြစ်ပါသည်. သုံးအောက်တိုဘာလနံနက်မြို့တော်ခန်းမမှာ reveille နှင့်အတူစတင်သည်. အခမဲ့ herring နှင့်အဖြူမုန့်ထို့နောက်မှာထွက်ပေးထားကြသည် Leiden Waag. သငျသညျထို့နောက်တစ်ဦးဂီတစုရုံးခံစားနိုငျ ဗန် Der Werf အဆိုပါ Pieterskerk အတွက်ပန်းခြံနှင့်ဝန်ဆောင်မှု. ညဦးယံ၌ကလူအစဉ်အလာ Hutspot လို့ခေါ်တဲ့မုန္လာဥနီနှင့်ကြက်သွန်စွပ်ပြုတ်ကိုစား. အဆိုပါပွဲတော်တစ်ခုခမ်းနားမီးရှူးမီးပန်းများပြပွဲနှင့်အတူအဆုံးသတ်ရန်.
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 8: ရွက်အမ်စတာဒမ်
ရွက်သည်အစဉ်အလာဖြင့်စတင်သည် ချင်းပျင်းပြသခြင်း: ရာနှင့်ချီသောသင်္ဘောများသည် IJ သို့ရွက်လွှင့်ပြီးသင်ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်သောထူးခြားသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. အောက်ပါနေ့ရက်ကာလ၌, ရေပေါ်မှာတော်တော်များများပွဲရာအရပ်ကိုယူ, Skutsjesilen အပါအဝင်(ပုံမှန်ဖရီစီရသင်္ဘောနှင့်အတူပင်လယ်ကူး). တော်ဝင်နယ်သာလန်ရေတပ်ကိုလည်းရေပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသပါလိမ့်မယ်.
ရေပေါ်မှာရှိသမျှသောလုပ်ဆောင်မှုနောက်တစ်ခု, အဆိုပါ wharves အပေါ်လုပ်ဖို့အများကြီးလည်းရှိပါတယ်, ရာဒါအထူးစေသည်. အဆိုပါရွက်အစီအစဉ်ကိုဖျော်ဖြေရေးဂုဏ်ယူ, အတတ်ပညာ, ယဉျကြေးမှု, ဂီတ, နှင့်အားကစားနှင့်ကလေးများလှုပ်ရှားမှုများ.
ရွက်အမ်စတာဒမ်အရပ်ရှည်ရှည်သင်္ဘောများတစ်ဦးအထင်ကြီးခြင်းနှင့်မနှိုငျးယှစင်းကိုအာမခံ, ရွက်အမွေအနှစ်ယာဉ်, ခေတ်မီသင်္ဘောများ, ရေတပ်သင်္ဘောများ, နှင့်မိတ္တူပွားထဲ.
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 9: အရပ်၌တဲ ထိုး. နေထိုင်ခဲ့နေ့ရက်များ
အထူးစခန်းချ, တတ်နိုင်စခန်းချနေထိုင်မည့်, နှင့်ရိုင်းထဲမှာစခန်းချနေထိုင်မည့်တဲသို့နေ့ရက်များအတွင်းနယ်သာလန်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှများမှာ (သင်၏တဲထဲကနေ). များစွာသောမိတ်ဖက်နှင့်အတူတဲကိုနေ့ရက်များပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့. အမည်ရ; ဆိုဒ်များတပ် ချ., နယ်သာလန်နိုင်ငံသဘာဝအဆောက်အအုံများ၏ထိန်းသိမ်းရေးများအတွက် Society က, အဖြစ်သစ်တောရေးရာကော်မရှင်. သင်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအတွက်စခန်းဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောနေကြတယ်, စျေးပေါ, နှင့် Noordoostpolder ၏ရိုင်းတည်နေရာ. ဒါဟာအစရောနှောလူကြီးများနှင့်လေးတွေများအတွက်စူပါပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်!
အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အထူးပွဲများ 10: Parkpop
Parkpop နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကြီးဆုံးပေါ့ပ်ဖြစ်ရပ်များတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဇွန်လ၏နောက်ဆုံးတနင်္ဂနွေနှစ်စဉ်ကျင်းပ. အဘယ်အရာကိုဒါအထူးစေသည်, ဒါဟာလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
တစ်ဦးကပုံမှန်ဖြစ်ရပ်ပြီးကတည်းက 1981, ဒီအမျိုးသားရေးပေါ့ပ်ပွဲတော်မြေပုံပေါ်တွင်အဆိုပါဟိဂ်ထား. တစ်အကြီးစားအပေါ်အခမဲ့ဂီတပွဲတော်များမှကျေးဇူးတင်ပါသည်. နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်, ဒါကြောင့်ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်တောင်မှအကြီးဆုံးအခမဲ့ပေါ့ပ်ဂီတပွဲတော်ခဲ့သည်! သငျသညျကိုကျော်မြျှောလငျ့နိုငျ 350.000 ဒီကြောက်မက်ဘွယ်ပွဲတော်မှာကလူ.
သင်ဟိဂ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အနေဖြင့်လာမယ့်နေတယ်ဆိုရင်, က Zuiderpark မှာနေရာမှသံသရာတစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော idea က.
ကျနော်တို့အမည်ရှိပါပြီ 10 နယ်သာလန်နိုင်ငံအများစုကအထူးဖြစ်ရပ်များ, ဒါပေမယ့်မရေမတွက်နိုင်တဲ့အခြားသူတွေရှိပါတယ်. ၏အကူအညီဖြင့်ရထားပေါ်တွင် Get တစ်ဦးကရထား Save နှင့်ကိုယ်အဘို့ကိုတွေ့မြင်!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “10 အဆိုပါနယ်သာလန်ခုနှစ်တွင်အများစုကအထူးပွဲများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးကိုပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspecial-events-netherlands%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#.ရာဝတီ #မင်္ဂလာပါ #မင်္ဂလာပါ #ထူးအိမ်သင်